लौ घच्ची गयो पर्भो । पेलम पेलम ।
वाह! क्या शब्द स‌योजन !! क्या सटीक !! मजा आयो ।
कती हो एउटा टिकटको? बल्याकमा नि पाइन्छ कि ?
Nice one deep bro...
जे होस् फेरी return of the Gyaanendra को लागि प्रीष्ठभूमी तयार हुंदैछ। दिल्ली देखी लेखिएका बनेका सहमतीहरुको पालना न माओबादीबाट भयो, न सरकार पक्षबाट। माओबादीहरुले निर्वाचन पूर्व नै गणतंत्रको घोषणा माग गरेर बिशेष अधिवेशन बोलाउने हल्ला गरिरहदा सरकार पक्षबाट कुनै रेस्पोन्स भएन। बिशेष अधिवेशन भयो, समस्याले कुनै निकास पाएन। बिशेष अधिवेशन पछी र हीउंदे अधिवेशन अघिको समयमा कुनै संपर्क सम्वाद भएन। हिउंदे अधिवेशन शुरु हुने बित्तिकै "सहमती खोज्न" भनेर १० दिन बैठक स्थगित हुन्छ र त्यसपछिका ७ दिन त्यसै जान्छ र सहमती खोज्ने काम आठौं दिनबाट शुरु हुन्छ। त्यसपछि फेरि संसद स्थगित गर्न लाज त हुने नै भयो। संसद् चल्ने र सहमती खोज्ने काम् संगै बढाउने सहमती हुन्छ, अचम्म?
अहिले राजालाई खुब मज्जा आईरहेको होला, भूजा पनि मज्जाले ज्युनार गरिबक्सन्छ होला, किन भने अजिंगरको आहरा दैवले जुराउंछ भने जस्तो हाम्रा नेताहरु अजिंगरको मुखतिर बढिरहेका छन्।
सुनिन्छ आजकाल आर्मीका धेरै ठेक्कापट्टाहरु सुजाता दिदीका मान्छेहरुलाई पर्छ रे। आर्मीका कार्यक्रमहरुमा सुजाता दिदी बिशेष पाहुनाका रुपमा निम्त्याईनु हुंदो रहेछ। त्यसैले त वहां राजाको कू पस्चात मोटरसाइकालमा चढेर भारत पस्नु परेको कुरा बिर्सिएर आजकल राजाको तरफ्दारी गर्न तिर लाग्नु भएको छ। २०४७ सालको संबिधान ब्यूंताउने कुरा गर्नु हुन्छ।
चिरन्जीबि, खुमे, जोशी, गच्चदार जस्ता भ्रस्टहरु माओबादीहरु संग झुक्न नहुने अडानका कुराहरु गर्छन्, यिनीहरु नै हुन भांडहरु। देशमा जति गण्डागोल हुन्छ, त्यसको फाइदा लुट्ने यिनीहरु नै हुन्।
दीप गज्जब गयो ।
तर मलाइ त सबै संसद बाँदर र उनीहरुको कृयाकलाप जंगली लाग्छ। त्यसैले शिहदरवार कहिलेकाही चिडियाघर लाग्छ। जे भएनि प्रवेस गर्न टिकट त चहियो नै एउटा टिकट मलाइ पनि ल। :)
गज्जब गयो दिप ब्रो। यि नेता हरुको बयान त हजार जिब्रो भएका शेष नागले पनि सक्दैनन्। बरु टिकट बेचेर संसद चलाए अलि अलि पैसो त उठ्थ्यो देसमा। तर फिल्म फ्लप हुने को कि नेता ले सिठ्ठी र चप्पल खाने हुन ?